Masina amin’ny resaka rehetra atao
"Fa araka ny fahamasinan'Ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa hianareo amin'ny fitondran-tena rehetra". - 1 Pet. 1:15.
Rehefa voadio sy voasasa ny fo ary azon'ny Fanahy Masina itoerana, dia ho voamasina ho an'ny voninahitr'Andriamanitra ny leIa (...) Azonao apetraka eo anivon'ny rivo-piainana tahaka ny rivotra malefaka mitsoka avy ao Edenan'ny lanitra ny fanahinao.
Vohay ho an'i Jesôsy Tompo ny fonao. Tandremo ny lelanao. Aza avela hivoaka ho azy avy eo am-bavanao ny vosobosotra sy ny vazivazy tsy misy antony. Ireo no famantarana fa mila diovina amin'ny fahalotoany rehetra ny fonao (...) Ny tenintsika no amantarana ny toetry ny fontsika; ka na vitsy teny na maro teny ny olona, dia ny teniny hatrany no manambara ny toetry ny eritreriny. Azo tombanana mazava tsara araka ny toetry ny resaka ataony ny toetry ny olona anankiray. Haneho izany koa ny teny azo antoka sy feno fahamarinana. — VI, 13 Jona 1895.
Ataovy hita soritra eny amin'ny endrikao mandrakariva ny fifaliana ary ataovy milantolanto sy mahasarika araka izay azonao atao ny feonao. — AH, 432.
Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny feo sy ny lela ary raha ampiasaina araka ny tokony ho izy ireo, dia hery lehibe ho an'Andriamanitra. Midika zava-dehibe tokoa ny teny. Mety haneho fitiavana sy fanoloran-tena ary fiderana sy feon-kira ho an'Andriamanitra izany, kanefa koa mety haneho fankahalana sy valifaty. Manambara ny fihetseham-po ny teny . Mety ho hanitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana izany na avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana. Ny lela dia tontolon'ny fitahiana na tontolon'ny tsy fahamarinana. Misy ireo izay hita ho mifandray isan'andro amin'Andriamanitra ary mitafy ny fahalemem-panahin'i Kristy. Ny teniny dia tsy mba tahaka ny havandra mandrava izay rehetra ilatsahany fa misononoka mora avy eo am-bavany kosa. Manaparitaka ny voan'ny fitiavana sy ny halemem-panahy eny amin'ny alehany rehetra izy, ary tsy heverin'ny sainy akory izany satria velona ao am-pony i Kristy. Azo tsapain-tànana mihoatra noho ny ahitan'ny maso azy ny hery miasa mangina avy amin'izy ireo. SDABC 1:1119,
Hikoriana avy eo amin'ny molotra voamasina ny teny feno halemem-panahy sy fitiavana ary fangoraham-po. Lt 15, 1892.